Verify TCS iSizulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > Manage your Tax Compliance Status > Verify TCS iSizulu
UNGASIQINISEKISA KANJANI ISIMO SENTOBELO-NTELA
Ngalolu hlelo olusha lweSimo Sentobelo-Ntela (i-TCS), umkhokhintela usezokwazi ukugunyaza asebenzisana nabo ukuba baqinisekise isimo sakhe sentobelo-ntela ngenye yezindlela ezimbili ezikhona:
Ngokusebenzisa iNombolomfihlo yomgudu wokusebenza ngogesi, kumbe
Ngokusebenzisa Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela esitholakala ngohlelo olusha lwe-TCS
Ukuqinisekisa ngokusebenzisa iNombolomfihlo
Inombolomfihlo ingasetshenziswa ukuqinisekisa isimo sentobelo-ntela,
nge-inthanethi usebenzisa eyakwa-SARS i-eFiling, kumbe
Isu-Ngqangi: Uma kusetshenziswa iNombolomfihlo ukuqinisekisa, imiphumela evelayo iveza isimo sentobelo-ntela ngendlela eyiso ngalolo suku nangaleso sikhathi okusetshenziswe ngayo iNombolomfihlo.
Ukuqinisekisa Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (i-TCC) esitholwe ngokohlelo olusha lwe-TCS
I-TCC ingaqinisekiwa ngalokhu:
nge-inthanethi usebenzisa eyakwa-SARS i-eFiling,
ngokushayela kwiContact Centre yakwaSARS (0800 00 7277), kumbe
Isu-Ngqangi: Uma i-TCC isiqinisekisiwe, imiphumela iyakuveza ukuthi i-TCC isasebenza yini ngosuku nangesikhathi oyibheka ngaso.
Ungayiqinisekisa kanjani i-TCS/i-TCC nge-eFiling yakwaSARS.
Isigaba 1: Ngena ku-eFiling
Ukuze usebenzise uhlelo lwe-inthanethi olusha lweSimo Sentobelo-Ntela, kufanele ube ngumsebenzisi ogunyaziwe we-eFiling. Umuntu ogunyaziwe (isibonelo, ummeleli womkhokhintela noma umsingathi we-eFiling) wesikhungi esingazimisela amalungelo namaqembu abasebenzisi kufanele bangene bese bethombulula ukusebenza kohlelo.
Isigaba 2: Thombulula uhlelo Lokuqinisekisa Isimo Sentobelo-Ntela
Ukuthombulula uhlelo Lokuqinisekisa Isimo Sentobelo-Ntela kuyinto eyenza kube kanye.
Uma usungenile, hlela kahle iqembu labasebenzisi kanye namalungela abasebenzisi ukuze ukwazi ukuqinisekisa i-TCS/ i-TCC
Cindezela ku “Tax Status
Qoka u- “Tax Compliance Status Verification”
Qedela uhlelo lokuthombulula
Isigaba 3: Qinisekisa i-TCS/ i-TCC yomkhokhintela
Qoka ikhethelo le “New Verifications Request”. Faka inombolonkomba yentela neNombolomfihlo kumbe inombolo ye-TCC komkhokhintela bese uyakuhambisa. Qinisekisa ukuthi imininingwane evelayo iyahambisana neyaloyo mkhokhintela ofuna ukuqinisekisa ngaye.
Uma kusetshenziswe inombolo ye-TCC, uhlelo luzodalula ukuthi i-TCC isasebenza yini. Uma kuyiNombolomfihlo esetshenzisiwe, kuzovela isimo sentobelo-ntela somkhokhintela sangeleso sikhathi futhi sizokube siphawulwe ngemibala kanye nengcaciso yokuthi leso simo sizokube sisho ukuthini. Imibala isho ukuthi izindaba zomkhokhintela zentela zangaleso sikhathi zimi kanhle noma cha:
Obomvu –Izindaba zakho zezentela kaziqondile futhi kawuyithobeli imigomo yentela
Oluhlaza –Izindaba zakho zezentela ziqondile futhi uyayithobela imigomo yentela
Manje usuzokwazi ukushicilela isiqinisekiso ukuze ugcine amarekhodi. Ukuqinisekisa kwakho kuzolondolozwa ngaphansi kuka “History” ukuze kuthathiselwe kukho ngokuzayo.
Ngeminye imininingwane ngezigaba , bheka Umhlahlandela weSimo Sentobelo-Ntela ku-eFiling.
Isu-Ngqangi: Izitifiketi Zobumsulwa KwezeNtela ezaakhishwa ngohlelo oludala kusadingeka ukuba ziqinisekiswe ngendlela eyayibekiwe endala yokuqinisekisa engaphansi kwekhethelo liak- “Services” emchayweni oku-eFiling.
Ukuqinisekisa i-TCC usebenzisa uhlelo lokuqinisekisa oludala cindezela lapha.
Shayela e-Contact Centre ku- 0800 00 SARS (7277) yakwa-SARS kumbe uhambele Egatsheni Lakwa-SARS.
Last Updated: 24/05/2016 4:38 PM ​